Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo La Wareegay Labo – Calamada.com
Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo La Wareegay Labo
calamada August 20, 2018 2 min read
Ciidamada Mujaahdiiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dagaallo culus ku qaaday Labo magaalada oo ka wada Tirsan Wilaayada Faryab ee Waqooyga Afghanstan degmooyinkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaatka maamulka Kaabul.
Weerarka Kowaad waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen degmada Bilchiragh waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo muddo kooban socday.
Ugu dambeyntii ciidamada Mujaahdiiinta Dhaalibaan ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta magaalada,iyadoona maleeshiyaatkii Murtad Ashraf Gaani ee ku sugnaay degmadaasi ay noqdeen kuwoo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka iyo tiro badan oo iyaga iyo hubkoodaba isku dhiibay ciidamada Mujaahidiinta ee dagaalka kula wareegay magaaladaasi.
Sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanstan ayaa Qaniimeystay oo gacanta ku dhigay gaadiid dagaal iyo hub fara badan,iyagoona sidoo kale dagaalka ku gubay tiro gaadiid ah oo uu lahaa maamulka Ridada Kaabul.
Weerarka Labaad waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen degmada Gehalazi ee isla Wilaayada Faryab,waxaa degmadan sidoo kale ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa Ridada Afghanistan.
Intii dagaalka uu socday waxey ciidamada Mujaahidiinta gacanta ku dhigeen Labo gaari oo noocyada gaashaaman ah iyo keydkii Hubka ee saldhiga degmada,waxeyna ugu dambeyntii furteen magaalada iyagoona Raayada Towxiidka ka taagay bartamaha magaaladaasi.
Furashada Labadan magaalo ayaa qeyb ka ah howlgal dagaaleedka Al-khandaq ee sida tooska ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ay ka wadaan guud ahaan gobalada dalka Afghanistan,waxaana xusid mudan in Shantii Bilood ee u dambeysay ciidamada Mujaahdiiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay la wareegeen oo ay furteen ku dhawaad 15 Magaalo oo ku kala yaala Waqogyga Konfurta iyo Bartmaha dalka Afghanistan.
332 total views, 4 views today
Previous: Dhageyso:Barnaamijka Soo Kabashada Bu’aale.(Q/1-aad iyo 2-aad+Sawirro)
Next: Toos U Daawo:Malaayiin Muslimiin Ah oo Banka Carafo Taagan Si Ay Ugutaan Tiirka Ugu Weyn Ee Xajka.
Ceel-Cadde: Caruur uu ku qarxay gantaal diyaaradeed oo ay ku ciyaarayeen (SAWIRO)